LegitVPN.com - isbarbar dhig kuwa ugu fiican kuwa VPN bixiya
VPN ugu fiican
VPNs ugu fiican ee Netflix
VPN-yada ugu fiican Shiinaha
VPN-yada ugu fiican ee loogu talagalay Chrome
VPN-yada ugufiican Torrent
Kuwa ugu Fiican VPN ee ugu Fiican
Ku soo dhawow LegitVPN.com - waxaan halkan u joognaa inaan kugu hagno si aad u dooratid VPN ugu fiican ee baahiyahaaga.
Waxaan dib u eegeynaa oo kaliya VPN bixiyeyaasha aaminka ah ee dhaqsaha u leh in la isticmaalo kuwaas oo cadeeyay kalsoonidooda.
Isbarbar dhig bixiyeyaasha VPN ee ugufiican
Kuwa ugu fiican uguna sharciyeysan VPN bixiyeyaasha sanadka 2020
Dib u eegista NordVPN
Dib u eegista CyberGhost
DaahsoonVPN Dib u eegis
Dib u eegista PrivateVPN
Akhriso dhammaan faallooyinka
Maxkamad bilaash ah oo 30 ah
La jaan qaada Netflix, BBC & Disney + Hulu
Daadad aan xadidnayn
In ka badan 55 dal
Booqo goobta NordVPN
In ka badan 90 dal
Booqo goobta ExpressVPN
Jaban VPN halkaas
Booqo goobta VPN ee Surfshark
Maxkamad bilaash ah oo 45 ah
Booqo barta 'CyberGhostVPN'
Maxkamad bilaash ah oo 31 ah
In ka badan 2000 oo server
IP-ga oo loo yaqaan 'IP'
Booqo goobta PureVPN
Qeybaha ugu sareeya
Ka furfuro Geo-xakamaynta si fudud adigoo adeegsanaya VPN-yada la socon kara. Waxaan dejineynaa maqaal fudud oo kugu hagaya adiga.
Chrome waa biraawsarka ugu isticmaalka badan adduunka. Runtii waa muhiim inaad ku ilaaliso amnigaaga internetka iyo magacaaga qarsoodiga ah qalabka VPN.
Adeegsade kasta oo internetka ah wuxuu u baahan yahay inuu ka taxaddro Torrents iyo Softwares-ka-faca-facooda ah. Waxaan soo jeedinaynaa in loo isticmaalo VPN asturnaanta.
Shiinuhu aad ayuu ugu adag yahay siyaasadaha waxa ku saabsan marinka adduunka oo dhan. Dalxiisayaasha runti dhib ayey ku noqon kartaa.
VPN sidoo kale loo yaqaan shabakad dalwaddii gaarka loo leeyahay waa wax laga yaabo inaad maqashay. VPN waa softiweer xaqiijiya isku xirnaanta ka dhexeeya kan wax qaata iyo kan wax diraya. Waxay ka dhigeysaa taraafikadaada dadweynaha inay noqdaan kuwo aan la aqoon. Dad badan ayaa u adeegsada asturnaan dheeri ah iyo aqoonsi la'aan laakiin si isdaba joog ah waxaa loo isticmaalaa in lagu xiro xirmooyin laga yaabo inay dejiyeen maamullada.
Sidoo kale adeegyo badan oo hoormo ah ayaa ku daabaca filimaan iyo taxane cusub gudaha USA tusaale ahaan ka hor intaysan ku dhamaan waddankaaga.
VPN waxaad kuheli kartaa waxyaabaha loo adeegsaday ee USA, maxaa yeelay webserver wuxuu u maleynayaa inaad ku sugan tahay Mareykanka.
Maxaan sameeyaa markaan dooranayo adeegga vpn-ka saxda ah?
Waxaa jira boqolaal VPNs halkaas laakiin waxaan kaliya isbarbar dhignaa kuwa ugu sareeya. Qaar badan oo ka mid ah waxay bixiyaan ballanqaadyo been ah oo aysan waligood bixin karin, waxaan kaliya taageernaa VPN-yada halkaas ku sugnaa muddo dheer oo caan ku ah warshadaha amniga. Sannadkii 2017 cilmi-baarisyo badan ayaa muujiyay in ay jiraan dad badan oo ku xad-gudbaya VPN-yada bilaashka ah ee VPN-yada ku saleysan si ay u helaan marin-u-helidda nidaamka dhibbanayaasha aan la mamnuucin.
Ma jiraan vpns bilaash ah oo xalaal ah, kaliya tijaabooyin bilaash ah waxaana laga heli karaa xagga sare ee boggan.
Sidee loo ogaadaa inuu VPN sharci yahay?
Uma baahnid inaad ka walwasho taas. Waxaan horeyba u tijaabinay isku xirnaanta ugu aaminsan ee VPN ee ay maamulaan shirkadaha dhabta ah ee adduunka lagu kalsoon yahay.
Miyuu VPN gaabiyaa xawaaraha shabakadda?
Goobaha qaarkood tani run ayey noqon kartaa. Waxaan tijaabinay boqolaal bixiyeyaal VPN ah oo kala duwan si aan u aragno taas oo keeni karta waxqabadka ugu fiican iyada oo aan luminin guryaha muhiimka ah. Xitaa waxaan ku tijaabinay ciyaaraha iyo daadka si aan u aragno inay runti yihiin waxa ay dhahaan.
Dusha sare ee internetka VPN ma ka badbaado badan yahay?
Xaqiiqdii. Markaad isticmaaleyso VPN waxaad gebi ahaanba qarsoon tahay oo amaan tahay. Qofna ma oga waxa aad qabato, cidda aad tahay iyo meesha aad joogto.
VPN miyuu ka saaraa fayrasyada iyo trojans?
Nasiib darro maya. VPN-yada waxaa badanaa loo aqoonsan yahay inay yihiin antivirus laakiin ma ahan. Kaliya waxay aaminaan isku xirnaantaada shabakadda adduunka oo idil. Kaama ilaalin karaan faylasha aad soo dejiso ama bogagga aad booqato.
Ma u baahanahay inaan xiro VPN markaan isticmaalin?
Maya maahan inaad Dad badan ayaa had iyo jeer ku haya inay badiyaan asturnaanta. Marka laga hadlayo taleefoonada iyo aaladaha mobilada waxay noqon karaan kuwo batteriga cuna.
Sidee loo adeegsadaa adeegga VPN?
Isticmaalka VPN waa fududahay oo dhakhso badan, waxay ku bilaabataa talaabooyin fudud.
Raadi VPN ku habboon baahiyahaaga. Waxaan kaa caawineynaa qeybtaan sidaa darteed maahan inaad sameysid cilmi baaris waqti badan naftaada ah, maadaama aan horeyba u tijaabinay dhamaan bixiyeyaasha VPN.
Mar alla markii aad iibsatay VPN waxaad dooneysay inaad hesho aqoonsiyadaada. Aqoonsiyadan ku soo gal boggagaaga VPN bixiyeyaasha kuna rakib arjiga qalabka aad rabto. Waxay noqon kartaa laptop, moobil ama desktop. Waad ka heli kartaa dhammaantood.
Hadda waxaad rakibtay softiweerka waa waqtigii la bilaabi lahaa oo lagu xiri lahaa meel aad dooratay.
Tilmaamaha ugu jecel
Eeg sida ay u fududahay rakibideeda iyo isticmaalkeeda. Kaliya qaybta khiyaanada leh ayaa helitaanka ugu habboon ee VPN kiiskaaga.
Warka amniga internetka iyo balastarrada
U nuglaanta Cisco & Firepower 23.7.2020
Qof kasta oo isticmaalaya Cisco iyo Firepower waa inuu si dhakhso leh u cusbooneysiiyaa darawaladooda. Dayacnaan daran ayaa la helay.
Yaan ka nahay LegitVPN.com
Waxaan nahay koox dad ah oo muddo tobanaan sano ah ku jiray warshadaha amniga internetka. Waxaan xiiseyneynaa ilaalinta asturnaanta internetka iyo macluumaadka shaqsiyeed. Taasi waa wax qofkasta oo naga mid ah ay tahay inuu ilaaliyo xasilloonida. VPNs waa habka ugu fiican uguna fudud ee mar labaad naftaada looga ilaaliyo dambiyada internetka. Waan ognahay inay jiri karaan waxyaabo aad u kala duwan VPN bixiyeyaasha qaar ka mid ah oo kaliya ujeedooyin sharci darro ah. Taasi waa sababta aan halkan ugu nimid inaan kugu hagno si aad u hesho tan ugu amniga iyo nabadgelyada badan ee VPN.
Maxaa loogu talagalay VPN-yada?
VPN (shabakad gaar loo leeyahay oo meherad ah) shaqada ugu weyni waa in aad ka dhigto heerarkaaga amniga-internetka mid aad u sarreeya oo ay ka dhigayso isku xidhkaaga kana qarinayso cinwaankaaga IP-ga kuwa wax jabsada.
VPN sidoo kale waxaa loo isticmaali karaa in lagu soo galo waxyaabaha quseeya sida daawashada wadamada kale durdurrada iyo tv-yada.
Waxaad sidoo kale ka soo dejisan kartaa xogta intarnetka adiga oo qatar gelinaya xiriirkaaga aan lagaran iyo midka aaminka ah
Amniga internetka waa wax aan dhamaanteen iska ilaalinayno. Falal dambiyeedyada internetka ayaa si joogto ah u kordhayay maalinba maalinta ka dambaysana weerarro badan ayaa soo dhacaya.
Weerarka ugu caansan waa Ddos (diidmada adeegga) taas oo jabineysa isku xirnaantaada ama jebinta xogta caadiga ah ee meesha macluumaadkaaga shaqsiyeed uu ugu sii gudbi karo gacmo xun.
Si loo hubiyo inaad nabdoon tahay waa inaad isticmaashaa VPN bixiyeyaasha kuwaas oo badbaado leh, dhakhso leh oo ammaan ah.
Waxaan nahay koox dad ah oo daneynaya ilaalinta anaga iyo kuwa lashaqeeya arimaha gaarka ah. Habka ugu fiican ee taas loo sameeyo waa helitaanka VPN sax ah. Anagoo tijaabinayna isbarbardhigaya bixiyeyaasha VPN ee kaladuwan waxaan ka caawin karnaa macaamiisha inay gaaraan go'aano wanaagsan.
Dib u eegista CyberGhost VPN
Cisco Asa iyo u nuglaanta Firepower
2020 LegitVPN.com - kuwa ugu fiican ee ugu fiican VPNs